Liverpool ayaa 24 saacadood qaadaneysa inay jabiso rikoorkii Manchester City ee Champions League – Walaal24 Newss
Liverpool ayaa 24 saacadood qaadaneysa inay jabiso rikoorkii Manchester City ee Champions League
February 15, 2018	0	By walaal24
Liverpool ayaa Porto kaga badisay Porto iyo taageerayaasheeda garoonka Estadio do Dragao iyagoo 5-0 ku garaacay kooxda reer Portugal. Natiijada kubada cagta ayaa si cad u xaqiijineysa Liverpool inay dhibco ka hesho wareega 8da, Reds ayaa sidoo kale rikoor cusub oo Champions League ah u dhigtay koox Ingiriis ah. Guushii 5-0 waa guushii ugu weyneyd ee ay ka gaarto wareega isreebreebka Koobka Adduunka.
Manchester City ayaa ah kooxdii hore ee rikoorka aheyd ka dib markii ay 4-0 kaga badiyeen Basel lugta hore ee wareega 16ka Champions League Talaadadii. Manchester City ayaa aheyd kooxdii Ingiriisiga ka baxday, si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa xilli ciyaareedkii hore ku dhufatay Porto 24 saacadood ka dib. Sadio Mane ayaa seddexleey dhaliyay seddexleydiisii, halka Roberto Firmino iyo gooldhaliyaha ugu sareeya Mohamed Salah ay sidoo kale shabaqa soo taabteen.
Mane ayaa ah goolhayaha afaraad ee ugu goolasha badan Yurub, ka dib markii Philippe Coutinho, Yossi Benayoun iyo Michael Owen. Reds ayaa sidoo kale xakameysay Porto seddex darbo oo goolal ah iyadoo Loris Karius uusan waligiis halis ugu jirin goolkii Liverpool. Liverpool ayaa ku soo laabatay Anfield lugta labaad iyagoo leh faa’iido weyn, taageerayaasha Porto ayaana haatan ku duceysanaya soo laabasho mucjiso ah.
Qalad qalqal ayaa dhigay Liverpool iyo Mane si ay ugu guuleystaan, ka hor inta Porto ay seddex gool dhalisay 45 daqiiqo oo dheeri ah. Liverpool ayaa sidoo kale ah gooldhaliyeyaasha ugu sareysa Champions League iyagoo leh 28 gool iyo 25 ka mid ah kuwa soo socda shantii kulan ee ugu dambeysay. “Midka seddexaad,” ayuu yiri Mane markii la waydiiyay goolkii uu ahaa goolashiisa. ‘Waxay ahayd shaqo fiican. “Waxaan mar walba ku riyaaqay inaan la ciyaaro ciyaartoydaan weyn. Koox la’aan [kooxda naga dambeeya] inkastoo aynaan waxba ahayn. Waxay na siinayaan kubada. ‘
Cristiano Ronaldo ayaana ka dulqaaday Neymar madaama uu ku riyoonayo Bernabeu.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka oo ka hadashay nooca doorashada ka dhacaysa Dalka 2020-ka
War deg deg:- Qarax Xooggan oo Goordhow Ka Dhacay Muqdisho
Wasiirka Arimaha Dibada Soomaaliya oo sheegay wax wada hadal hoose oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka yeesheen Soohdinta Badda majiraan
Dowlada Kenya oo ku amartay Diyaaradaha Muqdisho ka soo duula ay soomaraan magaalada Wajeer
Wasiiru Dowlaha Arrimaha dibedda oo ka qaybgashay shir looga hadlayay ka hortagga kooxda ururka Daacish
Daawo: Wasiirka Arimaha Dibada Somaliland oo sheegay in wadahadalada Soomaliya iyo Soomaliland dib u bilahbandono
Daawo: Gudomiyaha Xisbiga Wadani C/raxmaan Cirro oo booqasha ku tagay Gobolka Togdheer